1.Waa maxay Testosterone phenylpropionate? Sidee bay u shaqaysaa?
Testosterone waa hoormoonka ragga oo si dabiici ah uga dhex dhaca jirka aadanaha. Hoormoonka waxaa badanaa lagu sameeyaa ragga xiniinyaha. Hormoonkan wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa kor u qaadida muuqaalka nin iyo sidoo kale horumarka galmada. Astaamaha ragga, sida cufnaanta lafaha, murqaha, wax soo saarka shahwada, iyo waditaanka galmada, dhammaantood waxaa kiciya testosterone. Si kastaba ha noqotee, wax soo saarka testosterone wuxuu hoos ugu dhacaa hal sano. Dhanka kale, testosterone waa steroid anabolic oo lagu duro jirka si loogu caawiyo dhismaha muruqyada iyo kor u qaadida astaamaha kale ee ragga. Qof kasta oo la xanuunsan heerar testosterone oo hooseeya ayaa sidoo kale lagula talinayaa inuu qaato testosterone si looga caawiyo hagaajinta wax soo saarka hormoonka dabiiciga ah ee jirka.
Phenylpropionate testosterone (1255-49-8) waa steroid anabolic ah oo loo isticmaalo shakhsiyaadka la silcaya saameynta heerarka testosterone hooseeya. La'aanta testosterone ku filan jirka ayaa u horseedi karta dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan sida libido hooseeya, heerarka shahwada oo hooseeya, waxayna dib u dhigi kartaa horumarka astaamaha labka sida codka qoto dheer, gadhka, ama murqaha intaad kureyso qaangaarka. Haddii aad raadinayso daawo kaa caawin doonta dhismaha murqaha iyo sidoo kale gaarista himilooyinkaaga isboorti ahaan, markaa testosterone phenylpropionate ayaa ah tan ugu fiican. Steroidkani anabolic wuxuu siiyaa natiijooyin tayo leh illaa iyo inta aad raacdo tilmaamaha qiyaasta daawada.
Caadi ahaan, soo-saareyaasha testosterone waxay daawada ku daraan esters-ka kaladuwan si ay ugu suurtogeliyaan inay jirka ku sii firfircoon yihiin muddo dheer. Phenylpropionate waa mid ka mid ah esters-yada caadiga ah ee ku dhagan testosterone si ay u dheereeyaan nolosha firfircoon ee daroogada ilaa 4 maalmood ilaa 5 maalmood. Jirdhiska jirdhiska iyo ciyaartooyduba waxay ka mid yihiin isticmaaleyaasha ugu firfircoon testosterone phenylpropionate adduunka. Daawada waxay ka caawineysaa kor u qaadida awooda guud ee jirka, dhista murqaha, iyo waliba wanaajinta waditaanka galmada. Si kastaba ha noqotee, sida marka la isticmaalayo steroids kale, waxaa lagugula talinayaa inaad had iyo jeer u tagto baaritaan caafimaad ka hor intaadan bilaabin qaadashada dawadan. Isticmaalka testosterone phenylpropionate way ku kala duwanaan karaan shaqsiyaadka midba midka kale.
Sidee ayuu u shaqeeyaa Testosterone phenylpropionate?
Phenylpropionate testosterone (1255-49-8) sida steroids kale anabolic-ka waxay kicisaa jirkaaga si ay u soo saarto hoormoonka testosterone badan. Daawada waxay xaqiijineysaa inuu jirkaaga leeyahay heerar ku filan oo joogto ah hoormoonka testosterone. Mar haddii heerarka hoormoonnada labka ah ay kufilmaan nidaamka jirkaaga, waxaad si toos ah u bilaabi doontaa inaad ku raaxaysato faa'iidooyinka, oo waxaad si fudud u gaari kartaa yoolalkaaga shaqo. Hoormoonka wuxuu kaloo mas'uul ka yahay xoojinta luminta baruurta, joogtaynta muruqyada, iyo inuu kaa ilaaliyo Osteoporosis.
Wixii dhisme kasta, muruqyada jilicsan iyo xoogga jirka ayaa muhiim u ah waxqabadka wanaagsan ee tababarka iyo tartamada. Hoormoonka 'testosterone' wuxuu kaloo ka caawiyaa dib u soo kabashada unugyada kadib jimicsiga culus sidaa darteed inta lagu guda jiro wareegga bulking. Hormoonnadaani waxay kuxiran yihiin Androgen Receptors (AR) si loo dardar-geliyo luminta baruurta iyo koritaanka murqaha iyo sidoo kale hagaajinta. Si kastaba ha noqotee, si loogu helo natiijooyinka testosterone phenylpropionate ka fiican, waa inaad raacdaa qiyaasta leh cunto habboon iyo tababar. U sheeg Tababarahaaga iyo nafaqadaaga markaad bilawdo qaadashada qiyaasta testosterone phenylpropionate. Si dhakhso leh ula xiriir dhaqtarkaaga markaad aragto waxyeellooyin xun oo daran si aad uga badbaado dhibaatooyin caafimaad oo dheeraad ah.
2.Wareegga 'testosterone phenylpropionate'
Testosterone phenylpropionate waa in lagu maamulaa qiyaastii 6 illaa 8 toddobaadyo, iyadoo kuxiran waxaad ubaahantahay inaad ku guuleysato dhamaadka wareegga. Dhakhtarkaaga ayaa waliba u qaabayn doona sida ugu fiican testosterone wareegga phenylpropionate adiga kadib markaad baartid xaaladaada caafimaad. Mararka qaarkood dhakhtarku wuu xoojin karaa muddada qaadashada ama yarayn karaa. Baadhitaan caafimaad oo joogto ah ayaa lagama maarmaan noqon doonta si loo kormeero nidaamka dawada inta lagu jiro wareegga. Testosterone phenylpropionate waxaa loo isticmaali karaa keligiis inta lagu jiro wareegga ama lala socdo steroids kale anabolic ee natiijooyinka wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, ha isku darin dawooyinka adigoo aan la tashanin dawadaada.
Dadka bilowga ah waxaa lagula talinayaa inay ku bilaabaan qadar yar iyo wareegyo gaagaaban, kuwaas oo hadhow dib looga habeyn karo natiijooyinka wanaagsan. Isticmaalayaasha testosterone phenylpropionate ee horumarsan waxay ku dhejin karaan muddada ugu badan ee toddobaadyada 8 ama xitaa ka badan. Ha yarayn ama ha kordhinin wareegga testosterone phenylpropionate, haddii uusan dhakhtarku kugula talin inaad sidaa sameyso. Mararka qaar dawooyinka ayaa joojin kara socodka wareega bartamaha haddii aad la kulanto waxyeelooyin daran oo kuu horseedi kara dhibaatooyin caafimaad. Jidhka bini’aadamka wuxuu ula dhaqmaa si kala duwan dawooyin kaladuwan; sidaas darteed, maahan wax iska caadi ah in dawadu kuu shaqeyn doonto sidaad rabto.
3.Natiijooyinka testosterone phenylpropionate
Phenylpropionate testosterone (1255-49-8), markii si ku habboon loo istcimaalo, waxay keenaysaa natiijooyin toosan waxayna aakhirka kaa caawin doonaan inaad gaarto yoolalkaaga. Sidaa darteed, qiyaasta saxda ah, cuntada, iyo jimicsiga ayaa kuu dammaanad qaadi doonta natiijooyin tayo leh. Waa kuwaan qaar ka mid ah natiijooyinka testosterone phenylpropionate ee guud;
Koritaanka muruqyada, mid ka mid ah sababaha ay tahay inaad ku bilowdo qaadashada Testosterone phenylpropionate sida jir dhiska ayaa ah maxaa yeelay waxay ka caawineysaa kobcinta murqaha. Muruqyadu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nolosha dhismaha iyo inay gaaraan waxaad u baahan tahay inaad qaadato steroids saxda ah si kor loogu qaado horumarka muruqyada. Jir dhisme kasta ama ciyaartooygu wuxuu doonayaa inuu yeesho muruqyo jilicsan, taas oo lagu gaari karo qaadashada dawadan awoodda leh.
Gubashada dufanka, goynta wareega sidoo kale waa muhiim maxaa yeelay waxay gacan ka geystaan ​​ka takhalusida dufanka jirka ee xad dhaafka ah ee jirka. Testosterone phenylpropionate waa mid aad u awood badan oo goynaysa maadama ay kordhineyso dheef-shiid kiimikaadka, taasoo horseedaysa gubasho deg deg ah dufanka jirka. Waxaad u isticmaali kartaa dawada keligaa ama wada jir ah steroids anabolic ah oo xajin doona habka gubashada dufanka.
Ka soo kabashada degdegga ah ee muruqyada iyo hagaajinta, jimicsiga ayaa inta badan fidin kara murqahaaga sababo la xiriira culeyska jirka ee jimicsiga. Xanuunkii aad kala kulantay intaas ka dib waxay carqalad ku noqon kartaa tababarkaada oo mararka qaarkood way kugu adkayn karaan inaad ku sii wadato tababarka. Si kastaba ha noqotee, markaad qaadanayso testosterone phenylpropionate, taasi waa inay ahaato ugu yaraan walwalkaaga maadaama dawadu ay xoojinayso habka bogsashada unugyada. Muruqyadaadu had iyo jeer si dhakhso leh ayey u bogsadaan si ay kuu oggolaadaan inaad shaqeyso maalin kasta oo ay kuu fududaato inaad gaadho natiijooyinka aad doonayso.
Waxay kordhisaa guud ahaan awooda jidhka, tamar la’aan ku filan inay ka shaqayso oo si hufan u tartamto marwalba waa caqabadda ugu weyn ee dad badan oo jidh dhisku ay kala kulmaan hawshooda. Testosterone phenylpropionate waxay kor u qaadi doontaa heerarkaaga tamarta si ay kuu oggolaato inaad tababar ku qaadato saacado dheer isla markaana aad yoolalkaaga si dhakhso leh u gaarto.
Adkeynta nidaamka lafaha, osteoporosis waa caqabad hor leh dad badan, dawadani waxay gacan ka geysaneysaa la dagaallanka cudurka lafaha. Testosterone phenylpropionate waxay hagaajin doontaa caafimaadkaaga nidaamka caafimaadka ee lafaha. Sanado badan hadda, dhakhaatiirta ayaa u isticmaalay dawadan inay ka caawiyaan bukaanka osteoporosis. Daraasadaha ayaa muujinaya in testosterone phenylpropionate ay ka mid tahay daawooyinka ugu awoodda badan ee lagula dagaallamayo luminta cufnaanta lafaha.
Hagaajinta waditaanka galmada iyo rabitaanka cuntada; heerarka testosterone ee la xoojiyey ayaa si toos ah u hagaajin doona libido-kaaga. Dhanka kale, rabitaankaaga cuntadu sidoo kale way fiicnaan doontaa. Sidaa darteed, tani waxay ka dhigeysaa testosterone phenylpropionate wax soo saar aad u fiican oo loogu talagalay labadaba jirka iyo shakhsiyaadka la halgamaya waditaanka galmada oo hooseeya. Marka la adeegsado wareegga bulukeetiga, cunnadaada ayaa waliba la wanaajin doonaa oo ay kuu sahlaysaa inaad gaarto yoolalka aad rabto.
Cilladaha daawada 'testosterone phenylpropionate'
Sida daroogada kale oo dhan, testosterone phenylpropionate (1255-49-8) sidoo kale waxay leedahay dhinaceeda taas oo inta badan la soo gudboonaata adeegsadayaasha si xun u adeegsada. Waa inaad had iyo jeer raacdaa tilmaamaha qiyaasta daawada haddii aad rabto inaad yareyso waxyeeladaan. Si kastaba ha noqotee, iyadoo ay ugu wacan tahay isku-ekaanta jirka ee bini’aadamka, dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay la kulmaan waxyeelada xitaa ka dib markii la qaato qiyaasta saxda ah, laakiin daawada ayaa xakamayn karta taas. Qaar ka mid ah waxyeelooyinka 'testosterone phenylpropionate' ee caadiga ah waxaa ka mid ah;
Daawada waxay jirkaaga u horseedi kartaa finanka iyo finanka
Waxay u horseedi kartaa cadaadis sare
Waxaad sidoo kale la kulmi kartaa dhiig kintirka qanjirka 'prostate'
Waxay u horseedi kartaa inay u xiiraan qayb ka mid ah adeegsadayaasha
Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira waxyeelo yar yar oo aad la kulanto, kuwaas oo baabi'iya dhowr maalmood gudahood. Waxay ka mid yihiin, cuncun iyo barar agagaarka duritaanka, laakiin haddii ay ka sii darto sidii la filayay, takhtarkaaga ayaa kaa caawin doona inaad hesho daawaynta ugu habboon. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in inta badan saamaynta daawada 'Testosterone phenylpropionate' la maamuli karo haddii aad waqtiga ku ogeysid dhaqtarkaaga. Ha sii wadin qaadashada dawada haddii aad la kulanto mid ka mid ah dhibaatooyinka kor ku xusan oo aan dhaqtarkaagu oggolaan. Mararka qaarkood way adkaan kartaa in dib loo noqdo saamaynta ba'an haddii dawadu goor dambe soo daahdo.
4.Qiyaasta phenylpropionate ee tijaabada
Qiyaasta saxda ah ayaa markasta kuu dammaanad qaadeysa natiijooyinka tayada leh iyo waqtiga saxda ah. Waxaa lagu taliyay qiyaasta phenylpropionate testosterone waxay u dhexaysaa 100-200 mg oo ay tahay in la qaato hal mar seddexdii maalmoodba. Loogu talagalay isticmaaleyaasha cusub, waxaa lagu talinayaa in lagu bilaabo qaddar hooseeya wareegga koowaad ka dib waxaa lagu hagaajin karaa wareegyada soo socda. Qiyaasta qaadashada waa in lagu qaataa cirbad iyo suuxdin. Caadi ahaan, waxaad u baahan tahay inaad qaadato daawada qiyaastii toddobaadyo 6-8. Si kastaba ha noqotee, tan waa la beddeli karaa iyadoo ku xiran sida jirkaagu uga falcelinayo testosterone phenylpropionate. Dhakhtarkaaga ayaa kugula talin kara inaad ku bilowdo xitaa qiyaaso ka hooseeya 100mgs maalin kasta 3, kadib markaad fiiriso xaaladaada caafimaad. Mudanayaashu sidoo kale waxaa lagula talinayaa inay qaataan qiyaasta testosterone phenylpropionate ee hooseysa si looga fogaado horumarinta astaamaha ragga.
Dhanka kale, kuwa jirdhiska horumarsan ama ciyaartooyda 200mgs maalin kasta 3 waxay noqon doonaan qiyaasta saxda ah ee lagu gaarayo yoolalka la doonayo. Natiijooyinka fiicani had iyo jeer weheliyaan qiyaastaada oo leh cunto habboon iyo jimicsiyo intaa ka sii badan haddii aad rabto inaad dhisto muruqyada ama goorta aad goynayso wareegyada. Daawadan waxaa loo isticmaali karaa isugeynta kale ee steroids anabolic, laakiin waxay sidoo kale keenaysaa natiijooyin tayo leh marka keli loo isticmaalo. Wixii ku saabsan wareegga bulukeetiga, waxaad u baahan kartaa inaad ku dhejiso testosterone phenylpropionate steroids kale laakiin ku lug yeelato dhaqtarkaaga si ay kaaga caawiso inaad hesho isku-darka ugu fiican. Sidoo kale, xasuusnow inaad raacdo dhammaan tilmaamaha qiyaasta qaadashada maxaa yeelay xad-dhaafiddu waxay kuu horseedi kartaa waxyeelo daran.
5.Testosterone phenylpropionate nus nolosha
The testosterone phenylpropionate wuxuu leeyahay nolol firfircoon oo qiyaastii ah 4 ilaa 5 maalmood markii lagu duraa nidaamka jirkaaga. Sidaa darteed, daawada waa in la qaataa hal mar seddexdii maalmoodba mar ama laba jeer usbuucii si loo joogteeyo bixinta joogtada ah ee hormoonka testosterone ee jirkaaga. Tani waxay ka dhigeysaa testosterone phenylpropionate steroid anabolic kaamil ah oo loogu talagalay jir-dhiska jirka badan sababtoo ah noloshiisa firfircoon ee dheer. Waxa kale oo jirta waqti ku filan oo meesha duritaankaadu bogsato ka hor intaadan qaadan qiyaasta xigta. Xusuusnow, testosterone sidoo kale waxay xoojineysaa geedi socodka bogsashada murqaha, sidaas darteed dawadan waxay u adeegtaa sida ugu wanaagsan ee loogu talagalay ciyaaraha fudud ama jir dhiska.
6.Testosterone phenylpropionate ee goynta
Qalabka phenylpropionate testosterone waxay kaabis weyn ka dhigaysaa goynta wareegyada. Bixinta joogtada ah ee hormoonkan testosterone wuxuu kordhiyaa dheef-shiid kiimikaadka kaasoo ugu dambeyntii ka caawiya yareynta dufanka jirka. Jir dhisme ahaan, waa inaad mareysaa wareegga goynta si aad uga takhalusto dufanka jirka ee kaa horjoogsan kara gaarista yoolalkaaga. Dufanka jidhka waxaa lagu meeleeyaa maqaarka hoostiisa waxayna kugu adkayn kartaa inaad horumariso muruqyo jilicsan oo muuqda. Sanado badan hadda, kumanaan ciyaartooy ah ayaa usameynayey googoynta iyo goobaabinta.
Waxaad ku dari kartaa testosterone phenylpropionate oo leh steroids kale anabolic steroids ugu fiican oo loogu talagalay goynta wareegyada sida Winstrol, Anavar ama trenbolone natiijooyinka wanaagsan. Iyada oo ku xidhan xaaladaada hada iyo waxa aad rabto inaad gaadho, dawadaadu waxay kaa caawin doontaa inaad hesho qiyaasta goynta saxda ah si ay kaaga caawiso inaad kasbato muruqyada maadaama aad jarayso dufanka jirka ee aadan rabin. Si kor loogu qaado muuqaalkaaga guud ee jirkaaga sida ciyaaraha fudud ama jir dhiska, markaa waa inaad la socotaa qiyaasta xidhmada ee Testosterone phenylpropionate oo leh cunto ku habboon iyo sidoo kale jimicsiga.
7.Testosterone phenylpropionate ee bullying
Halkan waxaad leedahay hal hadaf oo kaliya, kaas oo ah inaad kasbato muruqyada waqtiga ugu gaaban ee suuragalka ah. Jirdhiska jirka wuxuu badanaa ku bilowdaa wareegga bulukeetiga, ka dibna waxaa ku xiga wareegga goynta. Jir-dhiska jirka wuxuu kaloo mari karaa wareegga bulukeetiga si joogto ah si loo helo loona ilaaliyo heerarka muruqyada. Testosterone phenylpropionate waa mid ka mid ah steroids anabolic steroids inta badan loo adeegsado wareegga bulking. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah ciyaartooydu waxay door bidaan inay ku daaweeyaan dawooyin kale si ay u dardargeliyaan natiijooyinka. Meelaha wareegaya waxaa ku jira jimicsiyo culus oo kala bixin kara muruqyadaada ilaa xadka, iyo hadaadan haysanin kaabis sax ah sida testosterone phenylpropionate, waxaad la kulmi kartaa xanuun daran.
Tani steroids anabolic waxay kicineysaa koritaanka murqaha sidoo kale waxay dardar gelineysaa habka bogsashada nudaha. Sidaa darteed, marka qaadashadaada testosterone phenylpropionate ee bullying, waxaad hubsan doontaa helitaanka muruqyada badan iyo soo kabashada unugyada dhaqsaha badan. Daawadu sidoo kale waxay leedahay dhalo dheer, taas oo u tarjumaysa nolol firfircoon, sidaa darteed waxaad kaliya ku duri doontaa qiyaasta laba jeer usbuucii. Markaa, u oggolaanshaha aagagga mudista inay bogsadaan ka hor intaadan qaadan qiyaasta xigta. Dhakhtarkaaga, nafaqadaada, iyo tababaruhu waa inay kugu hagaan habraacyada guud ee adeegsiga. Had iyo jeer hubso inay ka warqabaan himilooyinkaaga si intaa ka sii badan marka aad bilaabeysid bulukeeti ama gooynaysid wareegalada hagida saxda ah.
8.Faa'iidooyinka phenylpropionate testosterone
Testosterone phenylpropionate waxay siisaa faa iidooyin kala duwan dadka isticmaala ee sida saxda ah u istcimaalaya tilmaamaha qiyaasta qaadashada. Sida steroid kale oo anabolic kale ah, waa inaad raacdaa tilmaamaha adeegsiga ee ay soosaaraan soo-saaraha testosterone phenylpropionate iyo daawada aad u leedahay inaad ku raaxeysato faa'iidooyinkaas. Dawadani waxay cadeysay inay faa'iido u leedahay dhinacyada isboortiga iyo caafimaadka labadaba. Adoo eegaya dib u eegisyo badan oo testosterone phenylpropionate ah, Waxaad ogaan doontaa in adeegsadayaal badan ay ku faraxsan yihiin oo muujinayaan sida ay ugu qanacsan yihiin ka dib marka la isticmaalo steroid-ka anabolic ee awoodda leh. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka testosterone phenylpropionate ugu caansan waxaa ka mid ah:
Waxkasta oo aad ubaahan tahay inaad ka ogaato Anavar (Oxandrolone) jir dhiska(Wuxuu furan yahay tabare cusub oo cusub)
Nolol firfircoon muddo dheer
Qaybta ugu wanaagsan ee isticmaalka testosterone phenylpropionate (1255-49-8) waa inaad kaliya u baahan tahay inaad qaadatid qaadashadaada laba jeer usbuucii. Taasi waxay ka dhigeysaa this steroid anabolic mid ka mid ah daawooyinka aadka loo doorbido ee ay ka yimaadaan bodybuilders iyo ciyaartooyda. Testosterone phenylpropionate waxay firfircoon tahay nidaamka jirkaaga qiyaastii 4 ilaa 5 maalmood, taasoo siineysa aagagga muditaanka waqti ku filan oo ay ku bogsato ka hor intaadan qaadan xaddiga xiga.
Waxay keenaan natiijooyin tayo leh muddo gaaban gudahooda
Testosterone phenylpropionate waxay ka mid tahay dawooyinka anabolic-ka dhaqso badan u dhaqma ee suuqa maanta. Waxaad qaadan doontaa kaliya dawadan ugu badnaan toddobaadyo ah 8, oo waxaad gaari doontaa yoolalkaaga haddii aad u isticmaaleysid jarista ama wareejinta wareegga. In kasta oo dhaqtarkaagu fidin karo wareegga taas oo kuxiran himilooyinkaaga ama horumarkaaga ka dib qaadashada daawada, wali waxay leedahay mid ka mid ah wareegga qiyaasta gaagaaban ee adduunka ee steroids anabolic.
Waxay kobcisaa waxqabadkaaga
Ciyaaraha fudud ama jimicsiga jirka, waxaad u baahan tahay tamar iyo xoog jirka ah si aad u gaarto yoolalkaaga shaqo. Testosterone phenylpropionate waxay sare u qaadeysaa waxqabadkaaga guud labadaba tababarka iyo tartamada. Dhanka kale, dawadan waxay door muhiim ah ka cayaartaa caawinta ciyaartooyda iyo jir dhiska si loo yareeyo xanuunka murqaha iyo daalka kadib jimicsiga ama inta lagu gudajiro tartamada. Waa inaad hubisaa inaad raacdo dhammaan tilmaamaha qiyaasta si aad ugu raaxaysato natiijooyinka tayada leh. Waqtiga aad dhammaystirto wareegga testosterone phenylpropionate, waxaad ku horumarin doontaa xoogga kugu geyn doona tartamada iyo tababarka.
Daaweynta dhammaan saameynta yaraanta testosterone
Adduunyada caafimaadka, dhakhaatiirtu waxay u isticmaalaan testosterone phenylpropionate inay ku daaweeyaan bukaannada qaba saameynaha testosterone ee hooseeya sida galmada hoose ee ragga, osteoporosis, iyo cudurada kale. Heerarka testosterone ee hooseeya, gaar ahaan ragga, waxay la yimaadaan dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan oo testosterone phenylpropionate loo isticmaalo in lagu daaweeyo. Tusaale ahaan, marka astaamaha labku ay dib u dhigaan horumarinta, markaa kani waa mid ka mid ah dawooyinka loogu jecel yahay xagga caafimaadka.
Inkasta oo dhammaan steroidsyada anabolic ay la yimaadaan waxyeellooyin dhinacyo kala duwan ah, qaadashada qiyaasta Testosterone phenylpropionate waxay u soo bandhigi doontaa waxyeelo aad u yar haddii aad si sax ah u qaadatid. Waa mid ka mid ah steroids-ka anabolic-da ee suuqa ka jira oo leh waxyeelooyin aad u yar. Dhibaatooyinka badan ee waxyeelada Testosterone phenylpropionate waxay kaliya ku dhacdaa kuwa si xun u isticmaala daroogada. Ilaa intaad u hoggaansanto dhammaan tilmaamaha qiyaasta qaadashada, waad fiicantahay inaad tagto, oo waxaad ku raaxeysan doontaa dhammaan faa'iidooyinka testosterone phenylpropionate.
9.Faallooyinka testosterone phenylpropionate
Badanaa, macaamiil badan ayaa ra'yigooda ka dhiibashada badeecad gaar ah oo ku saabsan dib u eegista iyo qiimeynta. Sida badeecadaha kale ee caafimaad, testosterone phenylpropionate waxay ka heshay jawaab celin kaladuwan isticmaaleyaal kala duwan. Inta badan dadka isticmaala waxay ku qanacsan yihiin natiijooyinka ay soo saarto daroogada si aad u badan adduunka ciyaaraha halkaas oo ciyaartooyda iyo jirdhiska ay u isticmaalaan inay ka caawiyaan sidii ay u gaari lahaayeen yoolalkooda shaqo. Ciyaaraha, daawada ayaa ka caawisay dad badan inay helaan tiro badan murqaha inta lagu gudajiro meertada wareega iyo gubista dufanka jirka googoynta wareega.
Adduunyada caafimaadka, Testosterone phenylpropionate waxay heshay qiimeyn heer sare ah iyo dib u eegis togan. Caafimaadka ayaa soo sheegay guusha dawadan ee daaweynta daaweynta saamaynta testosterone hooseysa inta badan ragga. Sida hore loogu sheegay maqaalkan, heerarka testosterone hooseeya waxay kuu horseedi kartaa galmada hoose, osteoporosis, iyo daahitaanka horumarka astaamaha labka sida codka oo aad u sii dheer, gadhka, iyo kuwa kale. Kumanaan bukaan ah ayaa sidoo kale amaanaya testosterone phenylpropionate ka dib daaweynta ku guuleysta ee cudurada kala duwan.
10 ugu caansan Anabolic Steroids budada Raw ee 2019(Wuxuu furan yahay tabare cusub oo cusub)
Sidoo kale, qaar ka mid ah adeegsadayaasha ayaa ka cawda inay leeyihiin khibradda ugu xun ee testosterone phenylpropionate. Si kastaba ha noqotee, waxay u sababeeyeen jahwareerkooda xad-dhaafka ama si xun u isticmaalka testosterone phenylpropionate. Jirka bini aadamka wuu kala duwan yahay, mana aha in daawo kasta oo u shaqeysa saaxiibkaa si otomaatig ah adiga adiga ayey kuu shaqeyn doontaa. Waxaan had iyo jeer kula talineynaa dhamaan adeegsadeyaasha wax soo saarkooda inay maraan baaritaan caafimaad kahor inta aysan bilaabin qaadashada qaadashada. Had iyo goor waa fikrad fiican inaad kaqeyb gashid dhaqtarkaaga qaddarka qiyaasta testosterone phenylpropionate qibrad wanaagsan.
10.Testosterone phenylpropionate ee iibka ah
Waxa jira alaabooyin badan oo testosterone phenylpropionate laga heli karo labadaba khadka tooska ah iyo dukaamada jir ahaaneed ee adduunka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad taxaddar muujiso haddii aad u baahan tahay inaad hesho daawo tayo sare leh oo kuu dammaanad qaadi doonta natiijooyin tayo leh dhamaadka wareeggaaga. Maahan soo saare testosterone phenylpropionate kasta oo aad ka heshid internetka waa dhab, qaar ayaa u jira kaliya inay lacag sameeyaan, mana daneeyaan natiijooyinka aad ka heli doonto ka dib qaadashada qaadashadaada. Hortaada soo iibso testosterone phenylpropionate, marka hore samee baaritaankaaga. Hubso inaad fahanto sida ay alaab-qeybiyeyaasha testosterone phenylpropionate u shaqeyso kahor intaadan sameyn wax amar ah. Aqri dib-u-eegista macaamiisha kaladuwan iyo sidoo kale eegista qiimeynta shirkadda.
Waxaan nahay hogaamiyaha testosterone phenylpropionate soo saaraha iyo soosaaraha gobolka. Websaydhkeenu waa adeeg-saaxiibtinimo, sidaa darteed waxaad si fudud ugudamayn kartaa amarkaaga adoo isticmaalaya taleefankaaga casriga ah, kiniiniga, ama desktop-ka raaxada gurigaaga ama xafiiskaaga. Waxaan had iyo jeer hubinaa inaan gaarsiino dhammaan badeecada waqtiga ugu gaaban oo macquul ah. Waad awoodaa iibso budada phenylpropionate testosterone in ka badan ama ku filan oo keliya bulshidaada ama goynta Xusuusnow, si kasta oo aad u fududaato inaad daroogada u heli karto, ha bilaabin qaadashada bilaa hagitaanka takhtarkaaga.
Ka sokow, waxaan had iyo jeer kula talineynaa macaamiisheenna daacadda ah inay fahmaan waxa sharciyada dalkooda ka leeyihiin iibsashada ama lahaanshaha steroid anabolic ka hor inta aysan amar ka soo dhigin madalkeenna. Ma jeclaan lahayn inaan macaamiishayada dhibaato ka galno kuwa fuliya sharciga si loo iibsado alaabadayada tayada leh. Xaqiiji dhaqtarkaaga haddii ay jiraan wax xannibaado ah marka aad iibsaneyso jir dhiska testosterone phenylpropionate. Sidoo kale waad nala soo xiriiri kartaa wakhti kasta oo aad u baahan tahay inaad sameysato amar ama markaad walaac ama su'aalo ku saabsan badeecadaheena. Wakiilka miiska caawimaadu had iyo jeer diyaar bay u yihiin inay ku adeegaan.
11.Testosterone phenylpropionate vs Testosterone propionate ee jir dhiska
Ma jiro farqi weyn oo u dhexeeya labada dawooyinka maadaama ay si isku mid ah u shaqeeyaan. Dhammaantood waa steroids anabolic, waxayna wadaagaan isla nus-noloshii nolosha qiyaastii 4 ilaa 5 maalmood. Waad dooran kartaa inaad labada midkood qaadatid oo aad wali natiijooyin isku mid ah hesho. Labada testosterone phenylpropionate iyo testosterone propionate waxaa adeegsada jirdhiska jirka si ay uga caawiyaan dhismaha muruqyada iyo gooynta wareega. Daawooyinka waxay kor u qaadaan heerarka hormoonnada testosterone ee jirka, taas oo iyana keenta in la hagaajiyo waditaanka galmada, koritaanka murqaha, iyo goynta dufanka jirka ee xad-dhaafka ah. Ciyaartoy badan ayaa sidoo kale u isticmaala wax kasta oo ka mid ah labada-daroogo si kor loogu qaado wax qabadkooda tan iyo markii ay kordhiyeen xoogga guud ee jirka ee u saamaxaya inay si hufan ula tartamaan.
Testosterone phenylpropionate iyo testosterone propionate kaliya way ku kala duwan yihiin qaab dhismeedkooda kiimikada, laakiin waxay wadaagaan astaamaha badankood. Qiyaasta loogu talagalay labada steroids anabolic waa in sidoo kale la qaataa laba jeer usbuucii. Si kastaba ha noqotee, kala tasho dhaqtarkaaga dawooyinka si aad ugu wada isticmaasho labada si natiijooyin wanaagsan. Wax macno ah ma samaynayso in labadoodaba la qaato Phenylpropionate testosterone iyo testosterone propionate gudaheeda isla wareegga. Qaadashada hal mar ayaa faa'iido kuu yeelan doonta, laakiin markasta ka hubso dhakhtarkaaga. Waxaad ka iibsan kartaa labadaba steroids anabolic boggayaga internetka.
Tretzel, L., Thomas, A., Geyer, H., Gmeiner, G., Forsdahl, G., Pop, V.,… & Thevis, M. (2014). Adeegsiga dhibco dhibco qalalan ee falanqaynta xaddiga doping ee esters-ka anabolic steroid esters. Daabacaadda falanqaynta daawooyinka iyo fayo-dhawrka biomedical, 96, 21-30.
Bhawani, SA, Sulaiman, O., Hashim, R., & Ibrahim, MN (2010). Falanqaynta chromatographic chromatographic-lakabka-steroids: Dib u eegis. Joornaaliiste loogu talagalay cilmiga dawooyinka, 9(3).
Solimini, R., Rotolo, MC, Mastrobattista, L., Mortali, C., Minutillo, A., Pichini, S.,… & Palmi, I. (2017). Hepatotoxicity laxiriirta isticmaalka sharci darrada ah ee steroids anabolic androgenic ee qaadashada daawada. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 21(1 Qalabka), 7-16.